Xiisadda COVID-19 ee hadda jirta, siyaasad-dejiyayaashu waxay wajahayaan xiisad aasaasi ah oo u dhaxaysa xaqiiqda ah in shaqaalaha muhiimka ahi ay tahay inay helaan daryeelka carruurta si ay u sii wadaan bixinta adeegyada ay bulshadeennu ku tiirsan yihiin iyo xaqiiqada ah in goob kasta oo daryeelka kooxuhu ay kordhiso halista COVID-19 gudbinta.
Xataa waqtiyada xasiloonida, waxaa jira tixgalino muhiim ah si loo bixiyo daryeel badbaado leh oo korineed dhallaanka iyo socod baradka. Laakiin inta lagu jiro cudurkan faafa, goboladu waxay sameynayaan go'aamo adag oo ku saabsan sida wax looga qabto baahiyaha daryeelka carruurta ee shaqaalaha muhiimka ah iyadoo mudnaanta la siinayo caafimaadka iyo badbaadada carruurta, qoysaska, iyo bixiyeyaasha. Haddii gobol uu gaaro go'aanka lagu hirgelinayo daryeelka degdegga ah ee carruurta shaqaalaha muhiimka ah, waxaa muhiim ah in ay tixgeliyaan baahiyaha gaarka ah ee dhallaanka iyo socod baradka.
Gudaha Tixgelinta Dhallaanka iyo socod-baradka ee ku jira Daryeelka Ilmaha ee Degdegga ah ee Shaqaalaha Muhiimka ah, EBER ILAA SADDEX waxay siisaa talooyinka siyaasad-dejiyeyaasha iyo u doodayaasha markay ka shaqeynayaan qaabeynta nidaamyada si ay u bixiyaan daryeelka ugana jawaabaan baahiyaha dhallaanka iyo socod baradka ee shaqaalaha muhiimka ah.
Soo deji kheyraadkan cusub hadda oo isticmaal tallaabooyinka fudud ee hoose si aad ula wadaagto shabakadahaaga:
Ku laabo Warka